Imari yeCash Market Kwauri? - TMC App
Imari yeCash Market Kwauri?
Mari yemusika wemari ndeimwe yeanonyanya kufarirwa maturusi ekushandisa mari. Aya ma investimendi emari anosimudzirwawo semhando yepamusoro yehomwe yakagovaniswa. Asi usati wazvitenga, unofanira kutanga wanzwisisa kuti chii, zvakanakira ivo, uye kana vakakukodzera mari.
Chii Mari Musika Mari Mari
Mari yemusika wemari inogovana mari inotenga mari kana misika yemari, iyo, mumashoko ari nyore, inoratidza kuti iwe unokwereta kana kukwereta mari, zvichiteerana. Homwe yemari yemusika yakafanana neakaunti yako yekubhengi nekuti inotora mari yako uye inoishandisa kuita mabasa ekudyara. Chimwe chikamu chemihoro, chinouya nenzira yezvikamu, chinobhadharwa kwauri. Kazhinji, mari yemusika wemari inobhadhara mugove wemwedzi wega wega.
Mari yemusika wemari inowanzo dyara mukudyara kwenguva pfupi inokura mukati memwedzi isingasviki 13 pamwero mukuru. Tichifunga kuti mari yemusika wemari ndeyekudyara kwemari ine nguva pfupi, njodzi inodzikiswa zvakanyanya. Pfungwa iyi ndeyokuti kupa mari kwenguva pfupi kwakachengeteka zvikuru sezvo pane mukana mukuru wekuti huwandu huchadzorerwa. Kazhinji, mari yemusika wemari inotenga nyaya dzeUS Treasury, mapepa emakambani enguva pfupi, uye zvitupa zvedhipoziti. Kune marudzi akasiyana emari yemusika wemari zvichienderana nerudzi rwezvibatiso zvavanotenga. Musiyano unonyanya kukosha ndewekuti migove inowanikwa haina mutero kana mutero.
Zvakanakira zveMoney Market Funds
Nerudzi urwu rwekudyara, unogoneswa kunyora cheki dzinotora kubva kuhomwe yemusika wemari. Izvi zvinokutendera iwe kuti unakirwe nemabhenefiti emari yekugovera, uye iwe unogona kukurumidza kuwana yako mari. Nekudaro, iwe unofanirwa kuonesa nesangano rako kutanga maererano nemitengo uye zvirambidzo.
Mari yemusika wemari inonyanya kubatsira pakupaka mari yaunoda munguva pfupi. Izvi zvinodikanwa zvinogona kusanganisira dhipoziti yemotokari nerori, imba kana kutiza. Tichifunga kuti mari yemusika wemari yakazara mvura, unogona kupa migove yako muhomwe yemari chero nguva yaunoda.
Ndiani Anoisa Mari muMoney Market Funds
Mari yemusika weCash ndeyevanoisa mari vanoda kuita madzoro akanaka kubva mukudyara kwakachengeteka kwemari. Mari idzi dzinowanzoita mvura. Izvi zvinoreva kuti iwe une mukana wekubvisa mari mukati memazuva mashoma ebhizinesi kana uchida. Mari yemusika wemari zvakare inobvumidza iwe kuti uite zvakanyanya kuwedzera kwemitengo yemubereko. Izvi zvinogoneswa nekuisa mari yako mukudyara kwemari inogadzirika nekufamba kwemusika.
Mari yemusika wemari imari inodyidzana inodyara mumari kana misika yemari, iyo, mumashoko ari nyore, inoratidza kuti iwe unowana kana kukwereta mari, zvichiteerana. Homwe yemusika wemari yakafanana neyedhipoziti account yako kubhangi nekuti inotora mari yako uye inoishandisa kuita mabasa ekudyara mari. Mari yemusika wemari inowanzo dyara munguva pfupi mari yekudyara inokura mukati memwedzi isingasviki 13 pakakwirira. Nerudzi urwu rwekudyara kwemari, unogoneswa kunyora cheki dzinotora kubva kuhomwe yemusika wemari. Sezvo mari yemusika wemari izere mvura, unogona kutengesa migove yako muhomwe yemari chero nguva yaunoda.
Vamwe vari kuverenga:AppleunlockTmc appAppleunlockerVolte sip meseji sms kubata uye kuteereraSpymaster proMaitiro ekuona chiitiko pane yako routerNu votNyika dzaunogona kushanyiraAyiwwmqzBhjkwuyvGhostctrl downloadGhostctrl apk